आइपीएलः आज पनि चम्किँए सन्दीप, लिए पहिलो आभेरमै विकेट ! - Everest Dainik - News from Nepal
आइपीएलः आज पनि चम्किँए सन्दीप, लिए पहिलो आभेरमै विकेट !
इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल) मा किंग्स इलाभेन पन्जाव विरुद्धको खेलमा पनि नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले विकेट लिन सफल भएका छन् । उनले पहिलो ओभरको पाँचौ बलमा स्याम करनको विकेट लिन सफल भए ।
सन्दीपले आज आफ्नो पहिलो ओभरमा १० रन खर्चिदै १ विकेट लिइसकेका छन् । उनले कोलकाता विरुद्धको खेलमा पनि विकेट लिन सफल भएका थिए । आज पनि दिल्लीले टस जितेर बलिङ रोजेको छ ।
ट्याग्स: IPL, sandeep Lamichhne